Ihowuliseyili abenzi umnatha filter air kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
Isetyenziswa ngokubanzi, hayi kuphela imeko yomoya, kodwa ukuhluza kunye nokucoca ezinye iindawo, ezinje ngekhompyuter, enesiphumo esihle sokuncothula umoya ngaphandle kokuchaphazela ukungena komoya kunye nomthamo omkhulu wokucoca umoya. Ingasetyenziselwa njengesikrini sefestile, kwaye umphumo ungcono kunesikrini somiyane jikelele.
Iyahlala, kulula ukuyicoca, okoko nje uhlamba ngamanzi. Ingasetyenziselwa ukuphindaphinda ngaphandle kokutshintsha.
1. Umoya wenethiwekhi Izinto eziphambili: i-polyethylene, izinto ezinepolypropylene ngokusebenzisa inaliti yokucinezela ngenaliti, yomelele, ubukhulu becala yezihlanganisi zomoya kunye neefilitha zothuli.
2.Isicelo:Izixhobo zasekhaya (isixhobo sokupholisa umoya, isicoca umoya) Indawo.
• Ukuhamba komoya okukhulu kunye nokumelana okuphantsi
• Ubushushu nokufuma
• Ukuchasana neasidi eninzi kunye nealkali
• amandla oomatshini alungileyo,
12mesh / intshi ~ 100mesh / intshi
Isakhelo sangaphandle: ialuminiyam ingxubevange okanye inayiloni
umnatha Media: PP, PA, izinto PE
Egqithileyo isakhelo sokucoca ulwelo kumatshini wokushicilela
Okulandelayo: inayiloni lokucoca umnatha